माल फङ्सन्की, शुद्धी नस्ट ?
Homemanoranjanमाल फङ्सन्की, शुद्धी नस्ट ?
काठमाडौं । फिल्मी क्षेत्रमा लाग्नेहरूले गसिपमा आउनका लागि अनेक गर्छन् । हलिउड, बलिउड जस्तै नेपाली फिल्म उद्योगमा आउनेले पनि गसिपलाई चर्चामा आउने माध्यम बनाउने गरेका छन् । प्रियंका चोपडा, कट्रिना कैफका माल फङ्सन्का गसिप सामान्यतया आइ नै रहन्छन् ।
अझ, एन्जोलीना जोलीदेखिका यस्ता कथा मिडियामा कम छैनन् । तर, नेपाली फिल्म उद्योगमा भने हिरोइनका यस्ता घटना कमै मात्र आउने गरेका छन् ।
खासगरी गसिपमा आएर सँधै चर्चामा रहने काम गर्नमा अभिनेत्री रेखा थापा, नम्रता श्रेष्ठ, बेनिशा हमाल, निशा अधिकारी, प्रियंका कार्की र शिल्पा पोखरेलका अनेक दाउपेच चलिरहेकै थिए । अहिले नाम कमाइरहेकी अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहले पनि यस्तै निरन्तरता गरेकी हुन् की शुद्धी नस्ट भएको भन्ने चर्चा चलिरहेको छ ।
सवलांग भन्दा फरक पात्रलाई काखैमा राखेर माया गर्छु भनेर मात्र होइन, राजनीतिक पार्टीहरूमा माओवादी हुँदै राप्रपा छिरेकी रेखाका त भनिनसक्नु स्टन्ट छन् । त्यसपछि क्रिकेटर शरद भेष्वाकरसँग प्रेम गरेको, टाउको मुडुलाएको, सगरमाथा चढेको, नाममा थर बदलेका अनेक काण्डकी हकदार निशा अधिकारी हुन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा भित्रि बस्त्र नै नलगाई टाँग फोर फोटो खिचाउने वेनिशाको अर्को तरकिपको कुरासँगै डाइनिङ टेबुलको सेक्स मजा आउने प्रियंका कार्कीको अन्तरवार्ता कम थिएनन् ।
त्यतिमात्र कहाँ हो र ? तीन वर्षसम्म छवि ओझाले विवाह गर्न लागेको हल्ला चल्दा शिल्पा पोखरेलले हजुरबा नै भनेकी थिइन्, अस्ती भर्खरै उमेरले पाको हुने क्रममा छविसँगै विवाह हुन्छ भनेर अर्को हल्ला मच्चिरहेका बेला साम्राज्ञीले दुवईमा भएको कार्यक्रममा पारदर्शी बस्त्रमात्र लगाइनन्, मालफङ्स्न नै हुनेगरी बसेको तस्बिर एकाएक सार्वजनिक भयो ।
अनलाइन पोर्टलहरू र सामाजिक सञ्जालमा उनको यो तस्बिर निक्कै नै लाइट र ट्वीट पनि भए । जानेर हो की नजानी यस्तो गरियो यसबारेमा साम्राज्ञीले केही भनेकी छैनन् तर बजारमा यस्तै हल्ला छ– माल फङ्सन की शुद्धी नस्ट ?जनप्रहार साप्ताहिक बाट